ငါးကလေးချဉ်သုပ် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ငါးခုံးမ (သို.) မိမိနှစ်သက်ရာ ငါးအသေးလေးတွေကို(၃၀ ) ကျပ်သားလောက် လတ်ဆတ်တာရွေးဝယ်ယူပါ...။
ငါး ၊ ဆား ၊နှင့် ထမင်းပျော့ပျော့တို.ကိုသမသွားအောင်ရောနယ်ပါ..။
ပုလင်းကြီးကြီးတစ်လုံးမှာ သိပ်ထည့်ပြီး..အခန်းအပူချိန်မှာ (၅) ရက်လောက်
ငါးလေးချဉ်ကို ကြက်သွန်နီ ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း. ၊ နံနံပင် ၊ ရှောက်ရွက် ၊ ပင်စိမ်း၊
စသည့်မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာတို.တို.နှင့် ရောကာ ၊ ဆား ၊ ဟင်းခတ်မှုန်.လေးထည့်၊ ပဲဆီသန်.လေးနဲ.